Home » Lahatsoratra mampiavaka » McDonalds antitra sy lehibe indrindra koa: tsy nekena ny Dolara amerikana
Niorina ity trano fisakafoanana ity 286 taona lasa izay. Tamin'ny 1732, ny Hamburgers dia mbola olona nonina tao Hamburg naorina tamin'ny taona 500 AD. Ny famaritana ny trano fisakafoanana Arbat McDonald dia manazava: Burger sakafo haingana sy sakafo fisakafoanana fries.
Tongasoa ny mpizahatany amerikanina ary mahagaga fa betsaka fa mila mandoa vola Rosiana. Ny takelaka ao amin'ilay trano dia hoe trano fisakafoanana ao Rubles ihany.
Ity trano fisakafoanana ity dia ao Arbat, distrika kanto, làlana mpandeha an-tongotra 2km feno fiainana bohemia manodidina, toerana misy gastro ary sakafo eny an-dalambe, mozika, mpanakanto mpaka sary an-dalambe, mozika, poeta mitanisa fitiavana, tantara an-tsehatra ary tononkalo fanoherana ataon'ny mpanoratra, bara malaza , trano fisotroana sy trano fisakafoanana, tranombakoka, teatra, sinema, toerana tsy maintsy hitsidihana rehefa mitsidika ny renivohitra Rosiana Moskoa.
I Mosko no toerana tsy an'ny be antitra indrindra, fa koa McDonald lehibe indrindra any Eropa.
Eoropa lehibe indrindra ny McDonald trano fisakafoanana dia
miorina amin'ny Kianja Pushkin Ny haben'ny trano dia 2,500 metatra toradroa. Tamin'ny andro nisokafany, 31 Janoary 1990, ny trano fisakafoanana dia nametraka firaketana vaovao ho an'ny mpitsidika isan'andro, manompo mpanjifa 30,000